Taliyeyaasha Nabad Suggida iyo Booliska oo lagu wado in maanta la magacaabo
Thursday August, 16 2018 - 04:11:42
Thursday February 01, 2018 - 11:45:45 in by salman abdi
Saddex bil kadib waxaa lagu wadaa maanta in la magacaabo Taliyeyaasha Nabad Suggida Somaliya iyo Booliska oo muddooyinkii dambe Taliye la’aan ahaa, kadib xil ka qaadistii lagu sameeyay Saraakiishii hoggaaminaysay.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya inay suuragal tahay shirka Golaha Wasiirada Somaliya maanta in lagu magacaabo Taliyeyaasha Nabad Suggida iyo Booliska, sida Ilo wareedyo kala duwan ay xaqiijiyeen.
Xubno ka tirsan Villa Somaliya ayaa sheegay xalay in lagu waday magacaabistaan in la sameeyo, balse dib loogu dhigay in lagu magacaabo Shirka Golaha Wasiirada Somaliya ee maanta lagu wado inay yeeshaan xubnaha Xukuumada.
Inkastoo aanan saadaalin laga bixin Karin cida loo soo wado xilalkaan, ayaa haddana saacadihii ugu dambeeyay hadal haynta Madaxtooyadda iyo Xafiisyada Ciidanka waxa ay aheyd magacaabistaan maanta lagu wado ee Taliyeyaasha ciidanka.
Madaxweynaha Somaliya iyo Ra’iisal Wasaraha dalka ayaa la sheegayaa inay iska kaashadeen soo xulista xubnaha loo wado magacaabista Taliyeyaasha Nabad Suggida iyo Booliska Somaliya.
Nabad Suggida waxaa hadda xilka sii haya C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) halka Booliskana uu Ku sime Taliye ka yahay Taliye Ku xigeenka ciidanka Booliska Jeneraal Muqtaar.